Fitaovana fanamboarana Excel. Rindrambaiko fanarenana Excel. Amboary ireo rakitra Excel.
Nahoana DataNumen Excel Repair?
Ny tahan'ny fanarenana dia ny most mason-tsivana lehibe momba ny vokatra fanarenana Excel. Miorina amin'ny fitsapana feno nataonay, DataNumen Excel Repair manana ny tahan'ny fanarenana tsara indrindra, tsara lavitra noho ny mpifaninana hafa rehetra eny an-tsena!
Mianara bebe kokoa momba ny fomba DataNumen Excel Repair mifoka ny fifaninanana
M.Ss. Injeniera elektrika zokinjokiny
DataNumen Excel Repair nitahiry ny andro ary nahazo ny angon-drakitra nilaiko tamin'ny fisie maloto. Mora be ny mampiasa azy, niasa tsara ho an'ny ahy izy io
Nety tsara ilay izy! Ny teniko rehetra sy ny angon-drakoko (mety ho sarotra loatra) dia niverina indray! MISAOTRA ANAO!! Nandritra ny fahavaratra dia nanana aho
Brownwood, Texas, Etazonia
Aogositra 13th, 2014
Ny fitaovana fanamboarana Excel dia afaka naka ny angon-drakitra an-tsoratra rehetra avy amin'ny rakitra Excel 2 simba izay misokatra sy voatahiry rehefa nianjera tamin'ny PC aho.
Vahaolana amin'ny fanarahana ny lesoka mahazatra sy ny olana amin'ny rakitra Excel
Nahita votoaty tsy voavaky tao amin'ny "filename.xslx" i Excel.
filename.xls 'Tsy azo idirana.
Endri-javatra lehibe ao DataNumen Excel Repair v3.6
Tohano hanamboarana ireo rakitra Excel xls, xlw ary xlsx ao amin'ny kinova Excel 3, 4, 5, 95, 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 ary Excel ho an'ny endrika Office 365.
Tohano ny rakitra atolotry ny Excel ho an'ny Windows sy Mac.
Tohano hanarenana ireo angona sela ao anaty rakitra Excel.
Fanohanana hamerenana ny raikipohy, ao anatin'izany ny raikipohy zaraina sy ny raikipohy tafiditra-anaty.
Fanohanana hamerenana ireo endrika mahazatra sy ireo endrika manokana ho an'ny sela sy ny raikipohy.
Tohano ny fampidirana miaraka amin'ny Windows Explorer, amin'izay ianao afaka manamboatra rakitra xls sy xlsx miaraka amin'ny menio misy ny Windows Explorer mora foana.
Tohano hanatanterahana ny fanarenana Excel amin'ny alàlan'ny masontsivana fibaikoana.
mampiasa DataNumen Excel Repair hamerenana ireo rakitra Excel maloto
Rehefa ny rakitra Microsoft Excel .xls, .xlw ary .xlsx dia simba na simba noho ny antony maro samihafa ary tsy azonao atao ny manokatra azy ireo amin'ny Excel, dia azonao atao ny mampiasa DataNumen Excel Repair hamahana ny olana. Hasiana scan ny rakitra maloto ary hiteraka rakitra tsy misy hadisoana vaovao ho anao.
Fanamarihana: Alohan'ny hamerenana rakitra rakitra simba na simba miaraka amin'i DataNumen Excel Repair, azafady manakatona ireo rindranasa hafa mety manova ny fisie. Ary azafady, akatony koa ny Microsoft Excel.
Safidio ny rakitra Excel simba na simba hanamboarana:
Azonao atao ny mampiditra mivantana ny anaran'ny fisie Excel na tsindrio ilay bokotra hijerena sy hisafidianana ilay rakitra.
Default (nitranga in- DataNumen Excel Repair dia hitahiry ilay rakitra Excel raikitra ao anaty fisie vaovao antsoina hoe xxxx_fixed.xls ho an'ny rakitra .xls ary xxxx_fixed.xlsx ho an'ny rakitra .xlsx, izay xxxx no anaran'ny fisie Excel loharano. Ohatra, ho an'ny rakitra Excel loharano Damaged.xls, ny anarana default ho an'ilay fisie raikitra dia ho Damaged_fixed.xls. Raha te hampiasa anarana hafa ianao dia azafady mifidy na apetraho mifanaraka amin'izany:
Tsindrio ny bokotra, ary DataNumen Excel Repair start scanning sy fanamboarana ny rakitra Excel loharano.
Aorian'ny fizotry ny fanamboarana, raha afaka amboarina amin'ny fomba mahomby ny rakitra Excel, dia hahita boaty hafatra toy izao ianao:
Azonao atao izao ny manokatra ny rakitra Excel raikitra amin'ny Microsoft Excel.
DataNumen Excel Repair 3.1 dia navoaka tamin'ny 11 Desambra 2020
DataNumen Excel Repair Navoaka tamin'ny 2.9 Novambra 2 ny 2020
DataNumen Excel Repair 2.8 dia navoaka tamin'ny 16 Oktobra 2019
DataNumen Excel Repair Navoaka tamin'ny 2.7 septambra 16 ny 2019
DataNumen Excel Repair 2.6 dia navoaka tamin'ny 8 Jona 2019
DataNumen Excel Repair 2.4 dia navoaka tamin'ny 21 Janoary 2019
Tohano Excel 2019.
DataNumen Excel Repair Navoaka tamin'ny 2.3 Aogositra 20 ny 2018
Tohano ny Excel 2016 sy Excel ho an'ny Office 365.
Hatsarao ny fanarenana ny formula.
DataNumen Excel Repair 2.2 dia navoaka tamin'ny 24 Desambra 2015
DataNumen Excel Repair 2.1 dia navoaka tamin'ny 7 septambra 2013
Fanohanana hamerenana ny raikipohy zaraina sy ny raikipohy tafiditra ao anaty laharana.
Tohano hanarenana ny endrika isan'ny sela.
DataNumen Excel Repair 2.0 dia navoaka tamin'ny 22 Jona 2013
Tohano ny endrika Excel 2007, 2010 ary 2013.
DataNumen Excel Repair 1.4 dia navoaka tamin'ny 23 Mey 2005
DataNumen Excel Repair 1.2 dia navoaka tamin'ny 10 Febroary 2004
Fanohanana hamerenana ny raikipohy.
Tohano hamerenana ireo anaran'ny takelaka.
DataNumen Excel Repair Navoaka tamin'ny 1.1 Novambra 5 ny 2003
Hatsarao ny hafainganana sy ny maha marina ny fanarenana data excel.
Ataovy fohy kokoa ny hafatra momba ny hazo.
DataNumen Excel Repair Navoaka tamin'ny 1.0 Aogositra 5 ny 2003
Tohano hanamboarana xls sy xlw fisie amin'ny endrika Excel kinova 3, 4, 5, 95, 97, 2000, XP, 2003.
Tohano ny fampidirana miaraka amin'ny Windows Explorer, amin'izay ianao afaka manamboatra rakitra xls miaraka amin'ny menio misy ny Windows Explorer mora foana.